नेपाली सेनाले घेरा हालेपछि घर छोडेर भागे प्रचण्ड, के हो यथार्थ ? — Imandarmedia.com
काठमाडौ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले एकदमै डर छेरुवा नेता भएको बताएका छन्। कट्टेलले प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कुटुवालसँग डराएर एक रात घरनै छोडेर भागेको खुलासा गरेका छन्।
तत्कालिन सरकारले रुक्मांगत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको रात प्रचण्ड घर छोडेर भागेको उनले भनाई छ। ओ टिभी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले प्रचण्डको सुरक्षा टिममा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले आफूलाई बताएको बताए।
कट्टेलले त्यस दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट प्रचण्डलाई अन्त कतै बाहिर अरुकै घरमा राखिएको थियो। त्यसपछि बिहानै बालुवाटार पुर्याइएको थियो। सेनाले ‘कु’ गर्न सक्ने सम्भावनालाई देखेर प्रचण्डलाई लुकाइएको उनको जिकीर छ।
प्रधानमन्त्री निवास भित्रै असुरक्षित बनेर भाग्ने सम्भवत प्रचण्ड इतिहासकै पहिलो प्रधानमन्त्री होलान्। उनले भने, ‘प्रचण्ड कति डरपोक छन् भन्ने उदाहरण यही काफी छ।अहिले पनि प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओली सँग बेस्करी तर्सिएको उनको भनाइ छ।
प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तीहरु विक्षिप्तताको उपज भएको भन्दै कट्टेलले प्रचण्डको धम्कीको कोहि पनि नडराउँने बताए। ‘धुर्मसले ‘म त मर्छु की क्या हो’ भनेर हसाए जस्तै हो प्रचण्डले मर्छु भनेको’ उनले भने।
‘कहिले मरुँ मरुँ लाग्या छ भन्ने, कहिले वाइसीयललाई ठोक भन्ने यस्तो पनि नेताको बोली हुन्छ ? यो त पुरै जोकरको बोली हो। उनले भनेका छन्। वाइसियलले भन्दा पहिला युथ फोर्सले चाँही ठोक्ला भनेर पनि प्रचण्डलाई कट्टेलले सचेत बनाएका छन्।
‘जनयुद्धको आफ्नो इतिहाससंग प्रचण्डले नाता तोडेका छैनन् र त्यसको दायित्वबाट पनि भागेका छैनन्।’ गिरीले प्रचण्डका बारेमा थप लेखेकी छन्। अन्य नेताहरु जस्तो प्रचण्ड आफ्नो दायित्वबाट नभागेको गिरीको बुझाई छ। उनी लेख्छिन्, उनी भगौडा जस्तो देखिएका छैनन्।
भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएपछि कालापानी सहितका भूभाग समेटेर नक्सा बनाउँदा गिरी विपक्षमा उभिएकी थिइन्। उनले कालापानी सहितका भूभाग नेपालको हो भन्ने आधार नभएको बताएकी थिइन्।
साथै उनले चीनको उक्सावटमा नक्सा समेटेर संविधान संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाएकी थिइन्।गिरीलाई सांसद पदबाट हटाउन संसद र सडकमा चर्को आवाज उठेको थियो। त्यसपछि उनलाई समाजवादी पार्टी नेपालले सांसद पदबाट हटाएको थियो।
गिरी केपी ओलीको कटु आलोचक मानिन्छिन्। एक पटक उनले ओलीका कारण आफ्नो पद गएको आरोप लगाएकी थिइन्।साथै उने सांसद पद बचाउन अदालतको समेत सहारा लिएकी थिइन्। जुन उनको प्रयास असफल भएको थियो।